Baby – Page4– Healthy Life Journal
စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) သင့်တင့်တဲ့ သန့်စင်ထိန်းသိမ်းမှု နည်းလမ်းနဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး အလေ့အထတွေက ကလေးတွေကို မဖျားနာအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကလေးတွေကို တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းရေး ကောင်းမွန်ဖို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက သေချာသင်ပေးထားသင့်ပါတယ်။လက်ဆေးတာ၊ သွားတိုက်တာ၊ ပလုတ်ကျင်းတာ၊ ရေချိုးသန့်စင်တာ...
ငွေကြယ်စင်ယံ တရုတ်ပြည်က ကလေးတွေဟာ သူတို့ဘေးကင်းစေဖို့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ခြားနေစေမယ့် ဦးထုပ်ဒီဇိုင်းတွေနဲ့ ကျောင်းတက်လာကြပါတယ်။ ဒီဦးထုပ်တွေကို “တစ်မီတာဦးထုပ်”လို့ခေါ်ပြီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ဖို့ ခြားတဲ့အနေနဲ့ လပေါင်းများစွာကတည်းက လုပ်ထားတာပါ။ တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်း Hangzhou ရှိ ရန်ဇန်းကျောင်းက ကျောင်းသားတွေက ဧပြီလ...
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကိုယ်ဝန်ဆောင်တယ်ဆိုတာ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝမှာ အပျော်ရွှင်ရဆုံး အခိုက်အတန့်တစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားမှု ခံစားရတာနဲ့အတူ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ဗိုက်ထဲက သန္ဓေသားကို အထူးဂရုစိုက်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှသာ လမစေ့ဘဲ ကလေးမွေးဖွားတာမျိုး မဖြစ်အောင် ရှောင်လွှဲနိုင်မှာပါ။ လမစေ့...
ဇွန် အန်တယ်ဆိုတာ အစာအိမ်ထဲက အရာတွေကို အားနဲ့တွန်းကန်ထုတ်တာဖြစ်ပြီး အခြေအနေ အကြောင်းရင်း အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးငယ်ရဲ့ အသက်အရွယ်၊ တွဲဖက်ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာလက္ခဏာတွေနဲ့ ဆေးပညာတွေ့ရှိချက်တွေဟာ အန်စေတဲ့ အခြေခံအကြောင်းရင်းကို ရှာဖွေနိုင်တဲ့ အရေးကြီးအချက်အလက်တွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မွေးကင်းစအရွယ်တွေနဲ့ ကလေးငယ်တွေဟာ အစာကျွေးတဲ့...
ကလေးမွေးပြီးစ ဖြစ်တတ်တဲ့ဝေဒနာတွေ သက်သာအောင် . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကုဆရာဝန်ကြီး) မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ Q. ကလေးမွေးပြီးစမှာ ပုံမှန်လို နေထိုင်မကောင်းပါဘူး။ ပင်ပန်းသလိုလို၊ နွမ်းလျသလိုလိုနဲ့ နေရထိုင်ရတာ အဆင်မပြေလို့ပါ။ ဘယ်လိုနေထိုင် စားသောက်သင့်ပါသလဲ။ DawNilar (FB) A. ကလေးမွေးပြီးခါစမှာ ဝမ်းချုပ်မယ်၊ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မယ်၊ သွေးအားနည်းမယ်၊...